Ihe a bụ mpempe akwụkwọ si na Baịbụl Symmachus sụgharịrị n’ihe dị ka otu puku na narị afọ isii ma ọ bụ asaa gara aga. N’Abụ Ọma 69:31, o dere aha Chineke bụ́ Jehova n’asụsụ Grik
Ruo ọtụtụ afọ, Ndịàmà Jehova nọ na-agụ nsụgharị Baịbụl dị iche iche. Anyị nọkwa na-ebipụta ha ma na-ekesara ha ndị mmadụ. Ka oge na-aga, anyị chọpụtara na ọ dị mma ka e nwee nsụgharị Baịbụl nke ga-enyere ndị mmadụ aka inweta “ezi ihe ọmụma nke eziokwu,” bụ́kwanụ ihe Chineke chọrọ ka mmadụ niile nweta. (1 Timoti 2:3, 4) N’ihi ya, anyị malitere ịsụgharị Baịbụl n’asụsụ Bekee. N’afọ 1950 kwa, anyị bidoro iwepụta akwụkwọ Baịbụl ụfọdụ nke Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ. E ji asụsụ Bekee a na-asụ n’oge a dee ya. Ndị sụgharịrị ya etinyeghị okwu nke ha ma ọ bụkwanụ gbanwee ihe ọ bụla dị n’asụsụ ndị mbụ e ji dee Baịbụl. Taa, a sụgharịala Baịbụl a n’ihe karịrị otu narị asụsụ.
Ọ dị mma ka e nwee nsụgharị ga-akwanyere Chineke ùgwù, bụ́ onye e dere uche ya na Baịbụl. (2 Samuel 23:2) N’Akwụkwọ Nsọ ndị kacha mee ochie, aha Jehova pụtara ihe ruru ugboro puku asaa. Ihe e sere n’okpuru ebe a bụ otu n’ime ebe aha Chineke gbara n’Akwụkwọ Nsọ ndị ahụ. Ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ, e dere aha Jehova n’ebe niile ahụ ọ dị n’Akwụkwọ Nsọ ochie ndị ahụ. (Abụ Ọma 83:18) Tupu anyị ebipụta Baịbụl a, anyị sara anya ná mmiri meere ya nchọnchọ ọtụtụ afọ. N’ihi ya, e dere uche Chineke otú ọ ga-ekwe onye ọ bụla nghọta, ịgụ ya na-atọkwa ndị mmadụ ezigbo ụtọ. Ma è nwere Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ n’asụsụ ị na-asụ ma ọ bụ na e nweghị, gbalịa na-agụ Baịbụl, bụ́ Okwu Jehova, kwa ụbọchị.—Jọshụa 1:8; Abụ Ọma 1:2, 3.
Gụọ okwu mmalite dị ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ. Ị gụchaa ya, zaa ajụjụ a: “Olee otú kọmitii sụgharịrị Baịbụl bụ́ Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ si were ọrụ ahụ ha rụrụ?” Gụzie Jenesis 25:29; Aịzaya 14:23; Matiu 5:3; 11:12; 1 Ndị Kọrịnt 10:24, 25; na Ndị Filipaị 1:8. Jiri otú e si sụgharịa ha ná Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ tụnyere otú e si sụgharịa ha na Baịbụl ọ bụla ọzọ i nwere.
mailto:?body=Gịnị Mere Anyị Ji Bipụta Baịbụl A Na-akpọ Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1102012145%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Mere Anyị Ji Bipụta Baịbụl A Na-akpọ Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ?